Nepali Rajneeti | वैज्ञानिकले ‘पाताल’को खोजी गरे, पृथ्वीको केन्द्रमा लुकेको यस्तो संसार भेटियो !
वैज्ञानिकले ‘पाताल’को खोजी गरे, पृथ्वीको केन्द्रमा लुकेको यस्तो संसार भेटियो !
कार्तिक १४, २०७८ आइतबार ४९ पटक हेरिएको
काठमाडौं। वैज्ञानिकहरुले जमिनमुनि पातालको खोजी गरेका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको केन्द्मा नयाँ लुकेको संसार फेला पारेका छन् ।
आधा शताब्दीभन्दा धेरै समयदेखि पृथ्वीको इनर कोर ठोस भएको दावी गरिँदै आएको थियो तर नयाँ अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरुले यो इनर कोर थिलथिलो भएको पत्ता लगाएका छन् ।
५० वर्षभन्दा धेरै समयदेखि मानिसहरुलाई यही बताइँदै आइएको थियो कि पृथ्वीको इनर कोर फलामका अयस्कहरुको एक ठोस गोला हो । यसको बाहिर तरल आउटर कोर छ ।
तर, हालै जर्नल फिजिक्स अफ द अर्थ एण्ड प्लेनेटरी इन्टिरियर्समा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार इनर कोर पूर्ण रुपमा ठोस छैन । यो ठोस गोला कैयौं ठाउँहरुमा केही नरम देखि तरल धातुजस्तै छ ।
इङल्याण्डस्थित युनिभर्सिटी अफ ब्रिस्टलकी सिस्मोलोजिस्ट अर्थात भूकम्प विज्ञानी जेसिका इरविंगले भनिन् ‘हामी जति धेरै पृथ्वीको इनर कोरको अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यत्तिकै नयाँ खुलासा भइरहेका छन् ।
पृथ्वीको इनर कोर कुनै बोरिङ फलामको ठोर गोला होइन । हामी पृथ्वीको केन्द्रमा एउटा पूरै संसार देखिरहेका छौं ।’ जेसिका यो अध्ययनमा सहभागी छैनन् तर उनले यो अध्ययन पढेकी छिन् ।
यी तरंगहरु बग्ने २ तरिका हुन्छ । पहिलो सिधा रेखामा बग्ने कम्प्रेस्ड तरंगहरु र दोस्रो लहरदार हल्का स्तरका तरंग । हरेक किसिमका तरंगले आफ्नो गति बढाउन सक्छन्, घटाउन सक्छन्, उफ्रिन सक्छन् ।
यी तरंगहरु पृथ्वीलाई बनाउने पत्तहरुको बीचमा बहाव बनाइराख्छन् । कम र बढी भन्ने कुरा अलग अलग भौगोलिक गतिविधिहरुमा निर्भर गर्छ ।
रेट बटलर यो देखेर आश्चर्यमा परे कि लहरदार हल्का स्तरका तरंग पृथ्वीको इनर कोरमा रहेको ठोस गोलाको केही भागमा गोक्किएर फर्किए जबकि केही भागबाट भने पार भए । अर्थात पृथ्वीको इनर कोर पूरा ठोस छैन । यदि पूरा ठोस हुन्थ्यो भने सबै तरंग त्यससँग ठोक्किएर फर्किन्थे । तर, तरंगहरुले ठोस गोलाका केही भाग पार गरे अर्थात ती ठाउँबाट पार गरे जहाँ तरल धातु छ वा नरम छ ।
रेट बटलर र उनका साथीहरुले यो कुरालाई कैयौं पटक परीक्षण गरे । हरेक पटक एउटै परिणाम आयो । त्यसपछि रेटले पृथ्वीको इनर कोर अर्थात केन्द्र पूर्ण रुपमा ठोस नभएको निष्कर्ष निकाले ।
उनका अनुसार यो इनर कोर कहीँ नरम छ भने कहीँ तरल धातुको रुपमा छ । यसको अर्थ इनर कोरभित्र धातु, ठोस, तरल र नरम तीनै रुपमा छ । यो एक अलग किसिमको संसार हो जसको बारेमा वर्षौंपछि थाहा भएको छ । यसबाट भविष्यमा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको अध्ययनमा धेरै सहयोग मिल्नेछ । यो खबर साभार गरियको हो ।